SomaliTalk.com » 2010 » July » 16
Home » Archive Maalinta July 16th, 2010
HABKA UGU SAHLAN EE IS-HORMARINTA QOFEED (Qeybta 2aad) Hordhac Allaah ayaa mahad oo idil iska leh,nabadgalyo iyo naxariisina Nabigeena Muxammad ah korkiisa Allaha yeelo. Qoraalkaan oo taxane noo ahaa kuna saabsanaa “Habka ugu sahlan ee is-hormarinta qofeed”. Ayaan ku bilaabeynaa qeybtiisii 2aad Qoraal/risaalo Nololeedka Qofeed, kadibna waxan kusoo afmeeraynaa Hanaanka loo dajiyo hadafka toosan. Qoraal...
Washington D.C Metropolitan Area Somali Community strongly condemns the terrorist act in Kampala, Uganda
FOR IMMEDIATE RELEASE Contact: Hassan Warsame (703) 623-5273 Jamal Sh. Said (703) 870-5853 Washington D.C, U.S.A somalidiaspora@gmail.com Washington D.C, USA, Thursday, July 15, 2010: The Somali Community of the Washington DC Metropolitan area strongly condemns the terrorist act against the Ugandan people and other victims of this horrific crime; We wish to extend our most sincere condolences to...
Yaa u danqanaya shacabka Somaaliyeed?
Aslm Clkm Inkastoo aan labaatankii sano ugu dambeeyay is weydiinayay su’aashan ayaa waxaa haddana igu dhaliyay in aan qoraalkan ka qoro sida ay dad badan oo mas’uuliyiin sheeganaya oo aan weligood ka hadlin dhibaatooyinka shacabkooda soo gaara uga hadleen qaraxyadii habeen dhaweyto ka dhacay magaala madaxda waddanka Ugandha ee Kambala. Ugu horreyn inta aan u guda gelin qaraxyadii kambala ka dhacay...
Soomaaliyey: Sida Tani Dan maahee armaan Dawga garanaa!
Soomaaliyey kaca Kaca oo iskaashada Nin la soo kiraystiyo Cadow ruux kal kaaliyo Keligii danaystuhu Kafantiina yuu tolin Soomaaliyey kaca Kaca oo iskaashada Kabaqaad shisheeyiyo Kuman lagu shaqaystiyo Karinliyo afmiinshaar Kadinkiina yuu iman Erayadii: Abdullahi Spanish Kolkii ay dhacday Dawladdii uu Gar-wadeenka uu u ahaa –Allaha u naxariistee- Jaalle Maxammed Siyaad Barre, waddanka Soomaaliya wuxuu...
Rajo ka muuqata dhalinta Soomaaliyeed ee ku howlan ciyaaraha ee jooga qurbaha..!
Waxaa iminka ka soconaya magaalada Stockholm ee dalkan Sweden ciyaaraha Xagaaga ee SEUKI 2010 kuwaasoo ay ku faltamayaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka kala yimid dalal ka duwan balse ka mideysan ciyaarista kubada cagta oo ay jecelyihiin inay mustaqbal ka sameeyaan. Halkan ka daawo sawirada Intii aan joogey ciyaarahan oo furmay Isniintii tagtay waxaan indhaha u bir yareeynayay qaabka, abaabulka, isfahamka,...